Izindatshana zikaNina Ritz zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UNina Ritz
UNina ungumcwaningi wezobuchwepheshe nombhali ku DesignRush, imakethe ye-B2B exhuma imikhiqizo nama-ejensi. Uyathanda ukwabelana ngokuhlangenwe nakho kwakhe nokuqukethwe okunenjongo okufundisa nokukhuthaza abantu. Izintshisekelo zakhe eziyinhloko ukuklanywa kwewebhu nokumaketha. Ngesikhathi sakhe samahhala, lapho ekude nekhompyutha, uthanda ukwenza i-yoga nokugibela ibhayisikili.
ULwesine, May 28, 2020 ULwesine, May 28, 2020 UNina Ritz
Izinga lokuguqulwa kwamaselula limele iphesenti labantu abakhethe ukusebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza lweselula / iwebhusayithi elungiselelwe iselula, ngaphandle kwenani eliphelele lalabo abanikezwe lokho. Le nombolo izokutshela ukuthi muhle kangakanani umkhankaso wakho weselula futhi, ngokunaka imininingwane, yini okudingeka yenziwe ngcono. Abathengisi abaningi be-e-commerce abaphumelele ngenye indlela babona inzuzo yabo yehla uma kukhulunywa ngabasebenzisi beselula. Isilinganiso sokulahlwa kwenqola yokuthenga siphakeme ngokuhlekisayo kumawebhusayithi weselula, futhi lokho kunjalo
NgoLwesihlanu, Okthoba 19, 2018 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 UNina Ritz
Awukwazi ukugcina ongakuqondi. Lapho kugxilwe ekutholakaleni kwamakhasimende njalo, kuba lula ukuhanjiswa. Kulungile, ngakho-ke uthole isu lokutholwa, wenze umkhiqizo / insizakalo yakho ilingane nezimpilo zamakhasimende. Isiphakamiso sakho senani eliyingqayizivele (UVP) siyasebenza - siyenga ukuguqulwa futhi siqondise izinqumo zokuthenga. Uyazi ukuthi kwenzekani ngemuva kwalokho? Ngabe umsebenzisi ungena kuphi ngemuva kokuqedwa komjikelezo wokuthengisa? Qala Ngokuqonda Izithameli Zakho Noma kunjalo